သင်ရဲ့ ငွေကြေးများကို မြဲမြဲမြံမြံ ဆုပ်ကိုင်ထားနိုင်မည့် နည်းလမ်း - Myanmar Network
Posted by Yamin Aye on September 14, 2012 at 15:02 in သုတ/ရသ ဆောင်းပါးများ
မည်သည့်အသုံးစရိတ်အတွက် ငွေပမာမည်မျှ သုံးစွဲနိုင်သည် ဆိုသည့် အစီအစဉ်ရေးဆွဲထားခြင်း မရှိပါက ၀င်ငွေ၊ လစာများ နောက်တစ်ကြိမ် ၀င်မလာမီ ကျွန်မတို့ရဲ့ အသုံးစရိတ်များအား ပိုမိုသုံးစွဲထားမိတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါကျရင် ၀င်ငွေအသစ်များဝင်ရောက်မလာမီ ကာလတစ်လျှောက် ကျွန်မတို့ရဲ့ လက်ချည်းသက်သက် မလောက်မငှ ဘ၀နဲ့ အသက်ဆက်နေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ငွေကို အလွန်အရေးပါသော အရာများတွင် သုံးစွဲရန်အတွက်သာ တာစူထားသင့်ပါတယ်။ ငွေကို မည်သည့်အခါမျှ အလဟဿဖြုန်းတီးမပစ်သင့်ပေ။ ကျွန်မတို့ရဲ့ နေ့စဉ်ဝင်ငွေများအား စနစ်တကျ စိစစ်သုံးစွဲမှသာ ငွေကြေး ကြပ်တည်းမှုအခြေအနေကနေ လွတ်မြောက်နိုင်မယ်လို့ ကျွန်မ မြင်မိပါတယ်။
ဒါကြောင့် အရင်ဆုံး ပြုလုပ်သင့်သည်ကတော့ သုံးစွဲခွင့်ရှိသည့် ပမာဏသည် ၀င်ငွေနှင့် ညီမျှနေရပါမယ်။ ရ/သုံးငွေစာရင်း ရေးဆွဲထားရှိခြင်းဖြင့် သင်ရဲ့ ငွေကြေးများကို စနစ်တကျ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနှင့် သုံးစွဲနိုင်သည့် လက်နက်ကောင်းအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါမယ်။
ဒီတော့ နေ့စဉ်အသုံးစရိတ်များကို သေချာ မှတ်သားထားပြီး အပိုမသုံးပဲ လိုအပ်သော အသုံးစရိတ်ကိုသာ ထုတ်သုံးကြည့်လိုက်ပါ။ မိသားစုတစ်စုစီရဲ့ အခြေအနေချင်းကတော့ တူညီမှာမဟုတ်တဲ့အတွက် ဦးစားပေးစာရင်းတွေလည်း တူညီကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အရမ်းအရေးကြီးတာနဲ့ မလိုတာကို ခွဲခြားသိရှိမှသာ သင် သီးသန့်စီထားရှိပြီး လုပ်ဆောင်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ မိသားစုတွေ ဘာကြောင့် ငွေကြေးကြပ်တည်းသနည်းလို့ အမြဲစဉ်းစားကြည့်မိသည်။ ၀င်ငွေနဲ့ ထွက်ငွေ မညီမျှခြင်းကြောင့်သာဖြစ်သည်ဆိုတဲ့အချက်ကို အဖြေထွက်ရှိသည်။ တကယ်လို့ သင်ရဲ့ ၀င်ငွေ အတက်အကျ အနည်းအများ မညီမျှရင်တော့ သင်က ငွေပမာဏ များများဝင်သောအခါတွေမှာ ငွေများများ ပိုမို စုဆောင်းထားရှိလိုက်ပါ။ ငွေနည်းနည်းပိုရသော လတွေမှာ
အစားအသောက်တွေကို ဦးစားမပေးပါနဲ့။ ငါတော့ ငွေလေး ရှိတုန်း ကြေးအိုးလေးသောက်လိုက်ဦးမှ၊ ဘဲကင်လေး စားလိုက်ဦးမှ အလုပ်သွားတာ နောက်ကျနေပြီ ကားငှားသွားမှဆိုတဲ့ အသုံးတွေလည်း တတ်နိုင်သမျှ မလုပ်မိပါစေနဲ့။ သင့်အတွက် သိပ်အရေးမကြီးသော အရာ၊ ငွေကုန်ကြေးကျများခဲ့သော အရာများအပေါ် အသုံးစရိတ်လျှော့ချပြီး အလွန်အရေးပါသော အရာများကိုသာ ၀ယ်ယူရန် သင် သုံးသပ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ကြားရက်တိုင်း သင်ရဲ့ အသုံးစရိတ်များကို ပြန်စစ်ဆေးပါ။ အမျိုးအစားတိုင်းရဲ့ အမျိုးအမည်နှင့် ကိုယ်သုံးမယ့် တစ်ခုချင်းစီအပေါ် ကုန်ကျခဲ့မှုများကို ရေးချမှတ်သားလိုက်ပါ။
အဲ နောက်တစ်ပတ်ကုန်တိုင်း တစ်နေ့ချင်းစီ သုံးခဲ့သမျှကို အနှစ်ချုပ်ကြည့်ပါ။ အမျိုးအစားအားလုံးအပေါ် သုံးစွဲခဲ့မှုများကိုလည်း စာရင်းချုပ်ကြည့်ပါ။ ပြီးပြီဆိုရင်တော့ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ လေ့လာကြည့်သင့်ပါတယ်။
အဲဒီအချိန်ကျရင်တော့ ကိုယ့်ဘာသာ မေးခွန်းလေးတွေ မေးကြည့်သင့်ပါပြီ။
၁။ ငါ့ရဲ့ အသုံးစရိတ်များက ငါ့ရဲ့ ၀င်ငွေထက် ပိုများနေသလား။
၂။ ငါ ဒီလို လုပ်ဆောင်ကြည့်တဲ့အခါ ငါ့အတွက် ဘာကောင်းကျိုးတွေ ရရှိခဲ့သလဲ။
ဒီလို သုံးသပ်ကြည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ သင်ရဲ့ဘ၀မှာ ငွေကြေးအရာမှာ ငွေ များများကျန်ရှိနေစေဖို့ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကတော့ နှစ်သွယ်ရှိပါတယ်။ ဘာတွေလဲဆိုတော့ ပထမတစ်နည်းက
၁။ လျော့နည်းသွားသော စရိတ်စကများအတွက်
အကယ်၍ သင်ရဲ့ ၀င်ငွေ တိုးမလာပါက
- သင်ရဲ့ အသုံးစရိတ်များကို လျှော့ချကြည့်ပါ။
၂။ ပို၍ များလာသော ၀င်ငွေ
အကယ်၍ သင်ရဲ့ အသုံးစရိတ်များကို မလျှော့ချနိုင်ပါက
- ၀င်ငွေ တိုး၍ ရှာကြည့်ဖို့သာ လိုပါတော့တယ်။
တစ်ခါတလေ အသုံးလိုသော ပစ္စည်းတွေကတော့ ကျွန်မတို့အတွက် အမြဲတမ်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာ ကျွန်မ နားလည်ထားပါတယ်။ နေ့စဉ်စားသောက်နေသော အစားအသောက် စားသောက်ခြင်း နောက် နေစရာနေရာအတွက်လည်း ကျွန်မတို့အတွက်
တွေးပူနေရပါသေးတယ်။ နောက် အ၀တ်အထည်ကလည်း မ၀ယ်လိုမဖြစ်တဲ့အနေအထားပေါ့လေ နောက် အိမ်စရိတ် မီတာခ ဘာခ ညာခတွေကလည်း ရှိသေးတယ်။ ဒါတွေကတော့ လျှော့လို့ရမည် မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကျွန်မ ကိုယ်တွေ့ ခံစားမိပါတယ်။ ဒီတော့ ၀င်ငွေလည်း တိုးပွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အစီအစဉ်လေးတွေ ရေးဆွဲကြည့်ပေါ့နော်။ ၀င်ငွေအမြောက်အမြား လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ လုပ်ငန်းများများ တိုးပြီး လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် လုပ်အားခ ပိုရတဲ့ အလုပ်လုပ်ကြည့်ပါ။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ ၀င်ငွေကို စုပြီးပြီဆိုရင်တော့ ၀င်ငွေရစေမယ့် လုပ်ငန်းတွေမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြုလုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ ခေတ်ကာလအခြေအနေအရ အိမ်ထောင်တစ်ခုမှ အိမ်ထောင်ဦးစီးတစ်ဦးရဲ့ လုပ်စာကို တစ်မိသားစုလုံး စားနိုင်တဲ့အနေအထားပါ။
ဘယ်အချိန်ကလည်းဆိုတော့ ကျွန်မတို့ငယ်ငယ်အရွယ်လောက်ကပါ။ ခုတော့ ဒီလိုမဟုတ်တော့ပါဘူး။ တစ်မိသားစု လူကုန် အလုပ်လုပ်မှ ၀မ်းဝရုံ စားသာက်နိုင်တဲ့အနေအထား ခေတ်အခြေအနေကို ရောက်ရှိနေတာကို သင်တို့လည်း တွေ့ရှိမယ်လို့ ကျွန်မထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ပိုင်ငွေကို အစီအစဉ်ရေးဆွဲကြည့်တာက ဘာနဲ့တူသလဲဆိုတော့ ကားမောင်းတာနဲ့ အလားသဏ္ဌာန်တူပါတယ်။ တကယ်လို့သာ ကားမောင်းရှိန်ကို အရှိန်မြှင့်လိုက်မယ်ဆိုရင် လမ်းပေါ် ရွေ့လျားသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူး။ ဘရိတ်ကိုပဲ
ခဏခဏနင်းနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့် သင် မည်သည့်အရပ်မှ ရောက်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့ ကျွန်မ သိသလောက် ပြောရရင်တော့ သင်မှာ ရည်မှန်းချက်များ ချမှတ်ထားရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ နောက် အသုံးစရိတ်တွေကိုလည်း ထိန်းချုပ်လျှော့ချကြည့်ရပါမယ်။ ဒီထက် ပိုပြီး အရေးကြီးတာကတော့ ငွေကြေးအသုံးစရိတ်တွေကို ရေးမှတ်ထားသင့်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ခုချိန်ကစပြီး ကျွန်မ စမ်းသပ်ကြည့်နေတဲ့အတွက် သင်လည်း စမ်းသပ် လုပ်ဆောင်ကြည့်မယ်လို့ ကျွန်မ မျှော်လင့်နေမိပါတော့တယ်။
ြ့မန်မာအိုင်စီတီဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြပါရှိပြီး ဖြစ်ပါသည်။
Permalink Reply by maythawlawun on September 22, 2012 at 22:55
Permalink Reply by Thin Thin Yu on September 23, 2012 at 11:16
Permalink Reply by Myint Myint Oo on September 24, 2012 at 10:32
Thanksalot Ma Yamin Aye for your valuable post about how to grab income money firmly.
Permalink Reply by 36t649t4cx51y on September 27, 2012 at 12:55
Permalink Reply by Hein Ko Oo on September 29, 2012 at 9:43
Thank you for your suggestion and they may be very useful for my life.
Permalink Reply by Thaw Thaw on October 2, 2012 at 14:29
Permalink Reply by win win shwe on October 9, 2012 at 15:12
Permalink Reply by chocholinn on October 11, 2012 at 14:08
Permalink Reply by Zaw Win on October 29, 2012 at 16:30
It shows your goodwill.
Permalink Reply by Kyaw Sithu Aung@Fred on October 30, 2012 at 19:55